စာအုပ်စင် | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 31
ှsalai shwe linn – book published
ဆလိုင်းရွှေလင်း၏ အမှားကိုပြင်နိုင်သောသတ္တိ မိုးမခစာအုပ်စင်၊ အောက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၃ ဓမ္မရတနာ၊ ဓမ္မရံသီ၊ ရတနာမွန်၊ အနန္တဂုဏ်ရည်၊ အတွေးအမြင်၊ ခရစ်အသင်းတော်၊ သီလဝ၊ မေတ္တာရှင်၊ မိုးမခအွန်လိုင်းဝက်ဆိုက် စသော စာစောင်များတွင် ဆလိုင်းရွှေလင်း၊ ဝိသေသ၊ နေလင်းညီ ကလောင်အမည်များနဲ့ ရေးသားခဲ့သော ဆောင်းပါး ၂၃ ပုဒ် ပါဝင်သည်။ ‘မိတ်ကောင်းဆွေမွန်၊ လမ်းကောင်းညွှန်၊ များလွန်အကျိုး ရွက်သယ်ပိုး၏’ ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် စာကောင်း ပေမွန်များ ဖြန့်ချိပေးနေသော မိတ်ဆွေစာပေ၊ (၆၀ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ပေါက်တော၊ အင်းစိန်၊ ဖုန်း ၀၉- ၈၆၂- ၀၇၅၃ ) က ကိုမြသိန်း၏စီစဉ်မှုဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ စက်တင်ဘာလတွင် အုပ်ရေ ၅၀၀၊ တန်ဖိုး ၇၀၀ ကျပ်ဖြင့်ထုတ်ဝေသည်။...
Aung Din 1st Poem book after 30 years of poem writing
ကဗျာရေးသက် နှစ် သုံးဆယ် ရှိပြီဆိုတဲ့ “အောင်ဒင်” ပထမဆုံး ကဗျာစာအုပ်ထုတ်မယ် တဲ့ မိုးမခစာအုပ်စင်၊ အောက်တိုဘာ ၉၊ ၂၀၁၃ ကဗျာရေးသက် နှစ် ၃၀ ကျော်အတွင်း ပထမဆုံးအနေနဲ့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာအချို့ကို “ရန်ကုန် ငြိမ်းချမ်းရေး ကဗျာစု” အမည်နဲ့ စာအုပ်ထုတ်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ ကိုကိုကြီး တည်ထောင်တဲ့ ကေကျု (KQ) စာအုပ်တိုက်က ထုတ်ဝေမှာဖြစ်ပြီး စီစဉ်ပေးသူက ကိုသက်ဇော်ပါ၊ အောက်တိုဘာလကုန်မှာ စတင်ဖြန့်ချိပါလိမ့်မယ်။ မျက်နှာဖုံးပန်းချီဒီဇိုင်းကို ကိုမုတ်သုန်က ရေးဆွဲပေးပြီး အတွင်းပုံများကို ကိုမောင်နိုး နဲ့ ကိုစိုးနိုင်တို့ ရေးဆွဲပေးကြပါတယ်၊ အမှာစာများကို ကိုရဲ (သစ္စာနီ) နဲ့ ကိုသိန်းဇော် (မန္တလေးသိန်းဇော်) တို့က...
ဂျူနီယာဝင်း ဘာသာပြန် ကာမူးမိတ်ဆက် ရုပ်ပြစာအုပ် အခမဲ့ရယူပါမိုးမခစာအုပ်စင်အညွှန်း၊ အောက်တိုဘာ ၆၊ ၂၀၁၃ဒီနေရာကနေ အခမဲ့ ရယူပါ။တနင်္ဂနွေနေ့ကနေပြီး သောကြာအထိ အခမဲ့ ပရိုမိုးရှင်းအဖြစ် Amazon’s Kindle Store မှာ ပေးနေပါတယ်။ Amazon account တခု ဖရီးယူပြီး ကင်န်ဒဲလ်အက်ပ်နဲ့ ကိုယ့် ကွန်ပျူတာ၊ အိုင်ပက်၊ အင်ဒရိုက်တုို့မှာ ရယူဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။ No tags for this post.
Than WIn Hlaing’s MoeMaKa Articles published in Rangoon …
သန်းဝင်းလှိုင်ရဲ့ မိုးမခနိုင်ငံရေးဆောင်းပါးများ ရန်အောင်စာပေက ထုတ်ဝေ မိုးမခစာအုပ်စင်၊ အောက်တိုဘာ ၆၊ ၂၀၁၃ “တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဘာကြောင့်နိုင်ငံတော်အာဏာ သိမ်းပိုက်ခဲ့သလဲနဲ့ မိုးမခနိုင်ငံရေးဆောင်းပါးများ” လုံးချင်းစာအုပ် ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်အောင်စာပေက ၂၀၁၃ သြဂုတ်လက စတင် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးမခအွန်လိုင်းမှာ ပင်တိုင်စာရေးတဲ့ သန်းဝင်းလှိုင်ရဲ့ ဆောင်းပါးများထဲက (၁) တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဘာကြောင့် အာဏာသိမ်းသလဲ အပိုင်း ၅ ပိုင်း ။ (၂) ၊ မြင်သာမြင် မကြင်ရသေးသည့် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး (၃) ၆၉ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးမှသည် ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်သုို့ (၄) ပင်လုံဇာတ်ကြောင်း ပြန်ပြောင်းလေ့လာသော် အပုိုင်း ၄ ပိုင်း၊ နှင့် ၆၆ နှစ်ပြည့် အောင်ဆန်း အက်တီလီစာချုပ် ဆောင်းပါးတို့ ပါဝင်သည်။သန်းဝင်းလှိုင်ရဲ့ ပင်တိုင်ဆောင်းပါးများကို မိုးမခရဲ့ သည်နေရာမှာ ပြန်လည် ရှာဖွေ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းက စာဖတ်သူအများစုကြီးဟာ အင်တာနက်အွန်လိုင်းနဲ့ နီးစပ်ကြသူများ မဟုတ်တဲ့အတွက်...
Aung Din’s Regime’s Parliament Articles intoaBook publishing soon
ပြည်သူ့ခေတ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် ဆောင်းပါးများ စာအုပ်အဖြစ် ထုတ်မည်မိုးမခစာအုပ်ကြော်ညာ၊ အောက်တိုဘာ ၄၊ ၂၀၁၃ ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်မှာ အပါတ်စဉ် ဖော်ပြခဲ့တဲ့ “ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို အနီးကြည့်၊ အဝေးကြည့်” ဆောင်းပါးများ အပိုင်း (၁) မှ အပိုင်း (၃၄) အထိ စုစည်းပြီး ခေတ်ပြတိုက်စာပေမှ ထုတ်ဝေမှာဖြစ်ပါတယ်၊ ၂၀၁၃ခုနှစ် အောက်တိုဘာလကုန်မှာ ဖြန့်ချိပါမယ်၊ မျက်နှာဖုံး ပန်းချီဒီဇိုင်းကို ဘိုဘိုထွန်းရေးဆွဲပေးပါတယ်။ မိုးမခက ထပ်ဆင့် ကူးယူဖော်ပြခဲ့ရာမှာ ဟောသည်နေရာမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ခေတ် ဂျာနယ်ဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကတည်းက ထုတ်ဝေတဲ့ ဂျာနယ်ဖြစ်ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလက ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာဆရာ မောင်ဝံသနဲ့ မိတ်ဆွေ စာနယ်ဇင်းသမားများ ထူထောင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးစာစောင်တခု ဖြစ်ပါတယ်။...
Ye Yint Thet Zwe – Poem book for Saffron Revolution Anniversary
ရဲရင့်သက်ဇွဲ၏ ရွှေဝါရောင် ၅ နှစ်ပြည့်ကဗျာစာအုပ် ယခုထပ်မံဖြန့်ချိ မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ စက်တင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၃ (မူပိုင် – ရဲရင့်သက်ဇွဲ၊ မျက်နှာဖုံးနှင့်အဖွင့်ကဗျာ …- သြရသ။ စာအုပ်အပြင်အဆင် – ရဲရင့်) Saffron Poems – Ye Yint Thet Zwe by Moe Ma Ka No tags for this post.
MoeMaKa Burmese Monthly September 2013 – eBook published
မိုးမခ ၂၀၁၃ လစဉ် စက်တင်ဘာထုတ် ထွက်ပါပြီ မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ စက်တင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၃ အင်တာနက်နဲ့ မဖတ်ဘဲ မိမိ ကွန်ပျုတာနဲ့ ဖတ်ရှုလိုသူများအတွက် မိုးမခမီဒီယာရဲ့ သြဂုတ်လတွင်း တင်ဆက်ခဲ့သော စာမူများထဲက ကောင်းနိုးရာရာ ကောက်နုတ်ပြီး ပုံနှိပ်အသင့် အီးဘုတ်ဖတ်ချင်စရာကို ထုတ်လုပ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ MoeMaKa Monthly Magazine – 09-2013 by Moe Ma Ka မိုးမခအွန်လိုင်းဈေးဆိုင်နဲ့ Amazon Kindle e-book version ကိုလည်း တပါတည်း တင်ဆက်ထားပါတယ်။ No tags for this post.
2013 – No2 – MoeMaKa Monthly Coming Soon for September
စက်တင်ဘာ ၈၊ မိုးမခလစဉ် ဒုတိယအီးဘုတ် ထွက်မည် မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ စက်တင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၃ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက် အမှတ် ၂ အဖြစ် မိုးမခလစဉ်မဂ္ဂဇင်း တလအတွင်း ကောင်းနိုးရာရာ ဆောင်းပါးကောက်နုတ်ချက် စာစောင် အီးဘုတ် ထွက်နိုင်အောင် စီစဉ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်လက စတင်တဲ့စာစောင်က စာမျက်နှာ ၂၄၊ ဂျာနယ် (၁၁x၁၇ ဆိုက်ကြီး) ထုတ်တာဖြစ်ပြီး၊ ယခုလကတော့ (၅.၅x၈.၅) ဆိုက်လတ်ဖြစ်ပါတယ်။ စာမျက်နှာ ၅၀ လောက် ရှိမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အင်တာနက်မလွယ်တဲ့ မိတ်ဆွေ၊ ဒေသတွေအတွက် အဆင်သင့်ပုံနှိပ်ပြီး ထုတ်ဖတ်နိုင်အောင်၊ လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်အောင် စီစဉ်တာ ဖြစ်တဲ့အပြင်၊ တလတာ ထွက်ခဲ့သမျှ သတင်း၊ ဆောင်းပါး၊ စာမူတွေထဲက ကောင်းနိုးရာရာ စာမူတွေကို မာတိကာကောက်နုတ်ပြီး ရွေးချယ်ဖော်ပြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့အတွက်ကတော့ မိတ်ဆွေတွေကတဆင့် လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်အောင် စီစဉ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်ပြင်ပကတော့ အင်တာနက်အီးဘုတ်အဖြင့် တိုက်ရုိုက်ဆွဲချနိုင်အောင် တင်ဆက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ...
MoeMaKa Monthly with Selection of daily articles
မိုးမခက လစဉ်မဂ္ဂဇင်း အီးဘွတ် ၈လေးလုံး ၂၅နှစ်မှာ အမှတ်တရထုတ် မိုးမခ၊ သြဂုတ် ၈၊ ၂၀၁၃ မိုးမခမီဒီယာက နေ့စဉ် သတင်းဆောင်းပါးများ အင်တာနက်ကတဆင့် တင်ဆက်လျက်ရှိရာ လစဉ် ဆောင်းပါး ၃၀၀ ခန့်အထဲမှ ကောင်းနိုးရာရာ ဆောင်းပါးအချို့တို့ကို ကောက်နုတ်ပြီး လစဉ်အီးဘုတ် စုစည်းပြီး ထုတ်ဝေမည် ဖြစ်သည်။ ပထမစာစောင်အဖြစ် ၈လးလုံး အရေးတော်ပုံ ၂၅ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် တင်ဆက်လိုက်သည်။ ပထမစာစောင်တွင် မိုးမခ၀ိုင်းတော်သားများထဲက ငြိမ်းချမ်းအေး၊ မာမာအေး၊ သန်းဝင်းလှိုင်၊ အရှင်နန္ဒ၀ံသ၊ ဓမ္မဘေရီဆရာတော် အရှင်ဝီရိယ၊ မောင်စွမ်းရည်၊ ကိုရာဇာ၊ အေးငြိမ်း၊ ကူမိုးကြိုး၊ စောငို၊ အောင်ဝေး၊ မောင်ရစ်၊ ထွန်းမြတ်ဦး၊ ခိုင်လင်း (မေဃ၀တီ)၊ လောအယ်စိုး၊ အောင်ထက်၊...
Khaing Linn (May Ga Waddy) Book
ခုိုင်လင်း(မေဃ၀တီ) -မြန်မာနိုင်ငံအနောက်တံခါး၊ မွတ်ဆလင်ပြည်နယ် မှသည် … စာအုပ် ထွက်မည် မိုးမခစာအုပ်စင်၊ ဇူလိုင် ၁၃၊ ၂၀၁၃ ခိုင်လင်း(မေဃ၀တီ)ရဲ့ ဘင်္ဂလီအရေးနှင့်ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါး(၁၂)ပုဒ်ကို စာအုပ်အဖြစ် ရန်ကုန်က ဒီလ(၁၅)ရက်မှာ ထွက်မယ်လို့သိရပါတယ်။ စာမျက်နှာ(၁၁၂)မျက်နှာပါရှိပါတယ်။ ဒေါက်တာအေးမောင်က အမှာစာရေးပေးထားပါတယ်။ စာရေးသူရဲ့ တတိယမြောက်စာအုပ်ပါ။ စာအုပ်ရောင်းရငွေကတော့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတခုခုကို အားလုံးလှူမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Tags: Maung Swan Yi, ဘင်္ဂလီ
Page 31 of 37«1...2930313233...37»
ဒေါက်တာ ကျော်ကျော်ဝင်း - သမိုင်း အစဉ်အလာ နှင့် ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ဆောင်းပါးများ
ပူခေါမောင်း (မင်းတပ်) မန်းရွှေစက်တော် ကမ္ဘာအေး ချင်းဘုရားသမိုင်းစာအုပ် ထွက်ပြီ
ဦးလှရွှေ (ခ) အောင်သာ (PPP) စာအုပ်မိတ်ဆက်
Khit Maung - ၉၀ခုနှစ်ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲဆိုတာရဲ့ နှစ်လည်မှာ ခေတ်မောင်းဆိုတဲ့ အီးဘုတ်ထွက်
ရန်ကုန်ထုတ် မိုးမခလစဉ်မဂ္ဂဇင်း တွဲ၂၊ အမှတ်၎ ယနေ့ ထွက်ပြီ
မိုးမခနဲ့ တမိုးတည်းအောက်က 'စုံနံ့သာ မဂ္ဂဇင်း' အမှတ် ၅၊ မေလထုတ် ထွက်နေပြီ
မင်းရဲညွန့်လှိုင် - အ များ ဆို င် နာမ် က ဗျာစာအု ပ် ထွ က် ရှိ
Join 93,383 other subscribers
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month April 2018 (141) March 2018 (162) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
ညီမိုးဆွေ ● တတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်ခင် တနင်္ဂနွေတရက်က (ဝတ္ထုတို) https://t.co/rtMZIoBYDd https://t.co/jY0Xtnxbzk about2hours ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်းလိုင်လုဏ်ရဲ့ မြက်ပင်ကလေးရယ် … စိုးရိမ်မိတယ် … https://t.co/vCQW0CQuOg https://t.co/Cam6qHuL1W about3hours ago ReplyRetweetFavorite
ကိုသန်းလွင် ● ဆော်ဒီမင်းသား၏ အမေရိကန်ခရီးစဉ် https://t.co/2V0n7T5ZbS https://t.co/safEaTCfYc about4hours ago ReplyRetweetFavorite
စိန်ဝင်း ● သနားစရာ သတင်းစာဆရာ https://t.co/D8hdyUc4C6 https://t.co/9dbgA2SV4P about 16 hours ago ReplyRetweetFavorite
မောင်မောင်စိုး ● နှင်းဆီနီနီ အိပ်မက်များ – (၁၉၇၅ – ၁၉၈ဝ) – အပိုင်း (၆၉) https://t.co/Ojo2fXHCeY https://t.co/82DkrfVmTZ about 16 hours ago ReplyRetweetFavorite
Cartoon Box (3,399)